Anthony Martial Childhood Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ France Anthony Martial Childhood Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mara aha na aha njirimara; 'Nwoke Okenye'. Anyị Anthony Martial Childhood Story Plus Na-enweghị Nkọwa Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha nke French football na-aga n'ihu na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya, ndụ ịhụnanya na ọtụtụ obere ihe ọmụma banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere isi ihe mgbaru ọsọ ya mana mana ole na ole na-ele akụkọ Anthony Martial akụkọ nke na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị n'ihu adieu, ka ịmalite.
Anthony Martial Childhood Story - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
A mụrụ Anthony Joran Martial na 5th ụbọchị nke December 1995 na Massy, ​​Essonne, France site na nne na nna si mba ọzọ, Mr na Mrs Joran Martial. Ọ bụ nwa ikpeazụ na onye ikpeazụ nke ezinụlọ ya nke naanị ụmụnne abụọ ndị okenye na-enweghị nwanne nwanyị.
Thierry Henry Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
A mụrụ Martial Katọlik. Dị ka nwatakịrị, o nwere àgwà ihere na nke dị jụụ. N'ikwu nke a, ọ bụ onye ọgwụ telivishọn. Sagittarius amụrụ onye bọọlụ sitere na agbụrụ Guadeloupean.
Anthony Martial ezinụlọ na nke Thierry Henry (arụsị ya) nwere mmekọrịta chiri anya n'ihi ekele ha sitere na ya. N'ezie, ebe amụrụ Martial nke Massy dị naanị obere oge Henry bụ obodo ndị Les Ulis.
Thomas Lemar Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Ịgba egwu dị ka nwatakịrị nwere mmasị na football, ekele maka onye nkụzi ya (Thierry Henry) onye ezinụlọ ya maara nke ọma. Ọbịbịa na mmekọrịta dị n'etiti ezinụlọ abụọ ahụ kpaliri nlekọta ahụike na mmalite dị mma maka ọrụ Martial.
Ọ bụ ndị nne na nna Anthony Martial mere ihe mbụ mgbe ha matara na bọọlụ bụ ụzọ kachasị mma maka ụmụ nwoke 3 kama ịga n'ihu agụmakwụkwọ ha. Ha jụrụ ajụjụ iji mee ka ụmụnne okenye nke Martial banye na bọlbụ wee bido ịmalite ọrụ maka Martial n'onwe ya.
Djibril Cisse Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu
N'ezie, Anthony Martial akụkọ nwata bụ ihe gbasara nrọ nke gbadoro ụkwụ na-eso Thierry Henry's nzọụkwụ.
Mara malitere ọrụ ya n'obere ọkwa nke Les Les Ulis, ebe Thierry Henry malitekwara ọrụ ya dị ebube. Ọ bụ nwa ewu na-enye obi ụtọ nke aha ya dị elu nke ukwuu n'ụlọ anụ ụlọ na-ekele maka ọrụ ngosi ya.
Martial ji ọrụ ntorobịa ya na uwe ejiji nke asaa nke French French French French French Les Les Ulis, tupu ọ kaa akara ịkwaga Olympique Lyonnais mgbe ọ dị naanị afọ 14. Nke a bụ oge mmekorita ya na Alexandre Lacazette na Bafetimbi Gomis.
Franck Ribery Ụmụaka Akụkọ nke Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Eke
Agbanyeghị, ikike magburu onwe ya Martial na Lyon bịara doo anya ọzọ. Nke a dugara Monaco ịkwụ ụgwọ m 5million maka mbinye aka ya. (Ndị ọzọ ha na-ekwukarị bụ akụkọ ihe mere eme).
Anthony Martial Family Ndụ:
Anthony Martial si n'ezinụlọ ndị si mba ọzọ kwaga Guadeloupe na France iji mee ka ndụ ka mma. Guadeloupe bụ otu agwaetiti dị na ndịda Caribbean.
Mgbe ọ kwagara France na iji kwụsị ịda ogbenye, ezinụlọ ya nyochara nhọrọ dị iche iche maka onwe ha na ụmụ ha. Maka ha, ọ bụ inweta ọrụ nkịtị ka ha rie ma dịrị ndụ. A hụrụ football dị ka naanị ụzọ dịịrị ụmụaka ha.
Site na ndị ọkachamara, nna Anthony Martial (Joran) dị nso na ụmụ ya ka ọ na-elekọta ọrụ ha.
Papa Anthony Martial.
Nne Anthony Martial (Audrey) na-eme onwe ya ka ọ dịkwuo n'echiche. N'ebe ahụ na-akwado nkwado ụmụ ya. Ọfụma na-ahọrọkarị ileta mama ya iji rie nri ya n'ụlọ. Agbanyeghị, nke ha bụ ihe dị iche.
E gosiputala na ọkwa nke Anthony Martial bụ nchegbu maka ezinụlọ ya karịsịa nne ya. Dabere na Akuko General Midfield, mama ya na-amaghi ya.
Otú ọ dị, ọ na-arụ akụkụ ahụ nke ezigbo nne nke na-adịghị echegharị ma na-anwa ịnọnyere ya karịsịa n'oge nsogbu.
Anthony Martial's Relationship ndụ bụ nke jupụtara n'ọtụtụ akụkọ. Na-amalite, a na-akpọkarị ya a Ịhụnanya n'anya. Anthony Martial zutere mara mma Samantha Henela Jacquelinet mgbe ọ dị afọ iri na asaa.
Ha abụọ hụrụ n'anya ma lụọ di mgbe izu ole na ole hụrụ ibe ha. Samantha hụrụ ya site na ịkwado ya n'oge ọrụ ya.
"Mgbe ọzụzụ, achọrọ m ịbịa n'ụlọ ma chọta (Samantha). Enwere m obi ọjọọ ma hụ ya n'anya ka m gbaa m gburugburu. "
Di na nwunye ahụ mara mma na-ele anya dị egwu ma ha na-ahụkarị n'ebe ọha na eze. Alụmdi na nwunye ha ejirila ụmụ nwanyị abụọ gọzie, bụ Peyton na Toto. Obi ọjọọ bụ nna na-ahụ n'anya nke hụrụ ụmụ ya n'anya n'anya.
N'agbanyeghị ịhụnanya Martial nwere maka Samantha, akụkụ jọrọ njọ nke ọdịdị Sagittarius ya na-achọ ikpughe onwe ya wee mee ka a kpọọ ya 'Ịhụnanya n'anya'.
Ọtụtụ ebubo na-achọ obi ụtọ, na njem ebe ndị ọzọ emeela ka ọgba aghara na ụlọ ya si otú a na-eduga na mgbasa nke alụmdi na nwunye ya. Nke a bịara mgbe Samantha malitere na-enyo ya enyo na ọ ga-enwe mmekọrịta alụmdi na nwunye.
Nke a bụ ihe ọ na - enweghị ruo mgbe e jidere ya. Tupu ihe ahụ emee, ndị na-eguzosi ike n'ihe nye ya hụrụ ya dị ka onye nwere nwayọọ / jụụ / ihere, ọ bụghị nwoke nwere mmasị nwoke na karịa ihe niile, onye na-elekwasị anya na ezinụlọ ya na ọdịnihu na-aga n'ihu kama ịghọ aghụghọ.
Wissam Ben Yedder nwa akụkọ akụkọ gbasara eziokwu
Ọ bụ Footballlive na Brila onye mara na Martantha jidere ya na Martial.
Anthony Martial Cheating Akụkọ - Ihe Mere n'Ezie:
Banyere nsogbu mmekọrịta Anthony Martial, nke a bụ ihe akọọrọ.
Nwanyị ahụ ọ ghọgburu NA (Samantha), nwunye ya ochie na-ezighi ezi ma jiri amamihe jikọta ya na nwanyị ahụ ọ ghọgburu NA (X Factor wannabe Emily Wademan) iji megwara ya. Nke a bụ ihe dugara na ezigbo obi nwata Samantha.
Akụkọ nke Sun gosiri na Samantha rutere Emily site na Snapchat na WhatsApp na mbọ iji metụta ya n'ụzọ na-enweghị isi mgbe o zichara kọntaktị ya na ekwentị Martial. Nke a mere mgbe otu onye gwara ya banyere ekwesịghị ntụkwasị obi di ya na Emily.
Ọ ghaghị igbanwe onwe ya dị ka nwunye Anthony Martial mgbe ọ na-eru Emily na mgbasa ozi mgbasa ozi. Ebumnuche ya bụ inweta ozi zuru oke gbasara mmekọrịta di ya na ya.
Emily dara maka ya wee nyefee ihe niile Samantha chọrọ ịma. Nke a bụ ihe dugara Martial ka ya na Emily jidere ya n'otu ụlọ nkwari akụ ndị France.
Samantha toro nzaghachi Emily banyere ajụjụ ya ma kpọọ ya dịka ezigbo enyi. Ha abụọ enwetawo nkasi obi n'ime ibe ha n'agbanyeghị Samantha na-ekpughere ya ezigbo onwe ya. Ha abụọ akpọwokwa Anthony Martial dị ka mmadụ jọgburu onwe ya.
Ebumnuche maka Samantha nchịkọta mgboagha site na Emily bụ ihe doro anya. Dị ka ndị nkiri si kwuo, 'ọ na-eme nke a ka o wee nwee ike inweta penny ikpeazụ ọ bụla (ego ịgba alụkwaghịm) n'aka Anthony maka nwa ha nwanyị nke ọma.'
Anthony Martial Alụkwaghịm - Ndụ Ya mgbe ọ gasịrị:
Anthony Martial Life Mgbe ịgba alụkwaghịm bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ ga - emebi ọrụ ya ọ bụrụ na ọ bụghị maka enyemaka site n'aka otu pụrụ iche.
Mourinho na ndị ọrụ ya na-echegbu onwe ya nke ukwuu na Martial na-efunahụ ya na a na-ekwu okwu iji nyere nwata ahụ aka ịchọtaghachi ya. Nke a dugara aka n'enye ụmụaka. Ndị nne na nna Anthony Martial ga-esonyere ya iji nyere aka zọpụta ọrụ Manchester United.
Nzube ha bụ inyere ya aka ịgbake n'aka ndụ ya mgbe ya na nwunye nwụsịrị. Ọbụna Louis van Gaal chọpụtara na ezinụlọ ya na nsogbu ya na oge ụlọ ya.
Anthony Martial Biography Eziokwu - Otú O Si Gaa:
Anthony Martial Love Story nwere uzo ozo di na nwunye ya na nwunye ya. Oge a, ọ kwagara na nke ọzọ. Ingchọta ịhụnanya ka na-ahụta dị ka ọrụ ebube nye ọtụtụ ndị fan.
Akụkọ akụkọ Anthony Martial nwetara nkwado mgbe ọ hụrụ Melanie DaCruz n'anya. Nke a mere mgbe ya na nwunye ya kewara, ọ ka na-esiri ya ike ịhapụ ndị nche na-eche banyere ihe di ya.
Anthony Martial Biography Eziokwu - Ighakọ na Ex Nwunye:
N'oge na-adịbeghị anya mgbe Anthony Martial hụrụ ịhụnanya, agha ọzọ dị n'etiti Samantha na Melanie Da Cruz.
Ihe na-esi na ya pụta bụ n'ụbọchị ụbọchị ọmụmụ nke abụọ nke Peyton nke dị na June 10 (Cheta: Peyton bụ nwa nwanyị Martial).
Dabere na Akụkọ Mgbaru Ọsọ, Martial gara ụbọchị ọmụmụ ụbọchị nwa ya nwanyị, ọ kpọkwaara Melanie Da Cruz. Mgbe e mesịrị n'abalị ahụ, Samantha zipụrụ ozi ndị a na SnapChat.
“Thebọchị 7 kachasị ogologo ndụ m. Ma ọ bara uru. Aghaghị m ịga ụlọ ikpe, ịlụ ọgụ maka njide nwa m nwanyị. Don't naghị asọpụrụ m Melanie Da Cruz.
I kwenyesiri ike ma mee ka nna nwa m wakpo m maka njide nwa anyị nwanyị. Ugbu a ka m matara na ị nwetara otutu akwara !. Daalụ maka ọnọdụ ahụ kpatara na ụbọchị ọmụmụ. N'ezie, ị na-ara ara. ”
Dabere na echiche ọha mmadụ, ọ bụghị atụmatụ Martia ịwakpo ya.
101 Great Goal Report egosila na Melaniw Da Cruz abanyela ọgụ na Martial n'ihi na ọ mụmụrụ nwunye ya mbụ bụ Samantha. Ọ lekwasịrị anya na nwoke ya, ọ chọghị ka mmejọ ya megharịa onwe ya n'ụdị ọ bụla.
Anthony Martial Brothersmụnna:
Nwanna nwoke nke okenye: Dorian Martial bu okenye na Anthony nwanne Martial. Ọ bụ nwa mbụ nke ezinụlọ Martial. Ọzọkwa onye mbụ banyere football.
Okwu nke mmadụ, Dorian anaghị ele mmadụ anya n'ihu site n'okike. Kama ịkụda nrụgide ahụ dị ka ị nwere ike ịtụ anya ya, ọ ga-arụ ụka na ọ ga-etinyekwuoro nwanne Anthony aka site n'ikwu na ya nwere ikike ịbụ onye isi United na France otu ụbọchị.
Ọ na-ahụ nwanne ya nwoke nke ọdụdụ dị ka onye nwere obere okenye ma ọ bụ okenye. Ka a sịkwa ihe mere aha Anthony Martial 'Nwoke Kasị Nwatakịrị'.
Dị ka Dorian si kwuo, “Tony furu Manchester United ihe ruru £ 57.6million n’ihi na ọ ga-abụ onye isi ọdịnihu ha na nke France.
Ọ nwere àgwà niile dị mkpa ka ọ bụrụ onyeisi ndị agha abụọ ahụ. Ọ bụ mgbe niile ka ọ bụ onye ndu nke sitere n'aka 6 n'agbanyeghị na ọ bụ nwa ikpeazụ nke ụlọ.
Nwanne m nwoke abughi onye gha agha ndi nile gbara ya gburugburu. Ọ dịghị mkpa ka ọ n'ihi na ọ na-ekwu okwu ya na nka dị egwu.
Ọ bụrụ na ọ mara, ọ na-eme ka a ndị ahịa nwere ego na àgwà pụrụ iche na pitch. Ọ maghị ihe okwu a bụ 'Fearjọ na nrụgide' pụtara. ' Nke a bụ echiche nwoke ahụ ma eleghị anya mara ya karịa onye ọ bụla ọzọ.
Anthony Martial nwanne nwanne nwoke bụ Johan Martial. A mụrụ ya na 30th nke May 1991 (4 afọ karịa nwanne ya nwoke nke tọrọ, Anthony) na Massy. Ọ bụ onye France na-egwu egwuregwu bọọlụ na-egwuri egwu maka Maccabi Petah Tikva dị ka ọ na-ede oge.
Ọ bụ mgbe ọ nọ n'okpuru ndị ntorobịa France na-eto eto nwere ndị otu n'okpuru 18 na n'okpuru 19 french. Ọ bụkwa akụkụ nke ndị egwuregwu meriri UEFA European Under-19 Championship.
Ụwa kachasị eto eto: Anthony Martial dị naanị afọ iri na itoolu mgbe United United nwetara ya maka £ 19m. Nke a emeela ka ọ bụrụ onye na-eto eto kachasị ọnụ n'ụwa. Nfefe ya bụ otu nke na-ama jijiji French football.
Kilian Mbappe bụ naanị ndị na-eto eto nọ n'afọ iri na ụma nke chịrị mgbasa ozi French karịa Martial. Na-enyocha onye nwere ike imebi ndekọ ahụ.
Anthony Martial :lọ:
Ọdịdị ya na àgwà ya dị mfe na-egosipụta nhọrọ ya maka ụlọ.
Anthony Martial bi n'okporo ụzọ Bungalo.
Marcus Thuram Childhood Akụkọ gbakwunyere Ezigbo Ihe Ndị E Dere Ndụ
Jean-Philippe Mateta Akụkọ nwata na gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu
Ibrahima Konate Akụkọ nwata